AMBALAVAO ATSIMONDRANO RN7 : Kamiao nahatrarana mpandeha an-tsokosoko miisa 16
Kamiao iray nitondra mpandeha an-tsokosoko miisa 16, niainga avy teny amin’ny Fasan-karana ho any Toliara, no tra-tehaky ny zandary nanao sakana tao Ambalavao Antananarivo Atsimondrano RN7, ny alin’ny 25 jolay 2020 tamin’ny 08 ora alina lasa teo. 28 juillet 2020
Niangavian’ny zandary ny mpamilin’ity fiara ity hamoha ny labasy aoriana hanaovana fitsirihana. Tampokatampoka teo anefa dia nisy finday naneno mafy avy ao anatin’ilay fitoeran’entana. Rehefa nozahana dia indreo olona maro mivangongo miafina voatakon’ny kesika sy baoritra tao aoriana. Nasaina nivoaka izy ireo ary nahatratra 16 ny isany, 6 lehilahy, 4vehivavy, 6 ankizy.
Araka ny famotorana vonjimaika nataon’ny zandary dia fantatra fa olona niakatra teo amin’ny fiantsonana Fasan-karana izy ireo ary nikasa hianatsimo. Nogiazan’ny zandary avy hatrany ny fiara, notanana harahi-maso koa ny mpamily sy ny mpamily mpanampy ary notanana ihany koa ireo mpandeha hanaovana famotorana.
Nanantitra hatrany ny teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena fa mamoafady tanteraka ankehitriny ny fanaovana fitaterana olona an-tsokosoko, satria izay ihany no niteraka ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus manerana ny Nosy.
Mivoy resa-poko sy fankahalana ny filohan’ ny oniversiten’i Toamasina sy ny ekipany RAHARAHA BARIKADIMY (4652) 25 février 2021 Hivadika ho “tolona” ny tatitry ny Depiote Tim MIKATSAKA FANDATSAHAN-DRA (231) 25 février 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (143) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (137) 2 mars 2021 Handray andraikitra hatrany hisorohana izay rehetra mety ho fanakorontanana EMMO/NAT (78) 25 février 2021 « Hatao laharam-pahamehana ny fampianarana » FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA (70) 25 février 2021